ỊHAZI IHE NGBANWU D-LINK DIR-620 - NGWA - 2019
Otu n'ime isi ihe na kọmputa bụ motherboard. Ihe ndi ozo ndi ozo di na ya ma jikota ya. Tupu ịmalite iji PC gị, ọ ga-adị mkpa iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka motherboard ka ihe niile mejupụtara ya rụọ ọrụ nke ọma. Ka anyị lee usoro niile nke usoro a.
Enwere nkwụnye ihe ntanetị, njikọta dị iche iche, kaadị dị mma na ihe ndị ọzọ dị na motherboard, yabụ ị ga-etinye ngwa ngwa dị iche iche maka onye ọ bụla n'ime ha. Usoro ndị e nyere n'isiokwu a pụtara ntinye faịlụ niile n'otu oge, ebe ọ bụ na ndị ọzọ onye ọrụ ga-achọ itinye ihe niile n'otu n'otu. Họrọ usoro kachasị mma na ịgbaso ntuziaka ahụ, ihe niile ga-arụ ọrụ.
Usoro nke 1: Enyemaka enyemaka ndị ọrụ
Enweghị ụlọ ọrụ dị iche iche nke na-arụpụta nne na nna, ha niile nwere ebe nrụọrụ weebụ nke ha, ebe ihe niile dị mkpa dị, gụnyere ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ. Ị nwere ike ịchọta ha ma budata ha dị ka ndị a:
Mepee ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye na-emepụta ya. Ọ dị mfe ịchọta ya site na nyocha ọ bụla nchọgharị, ma ọ bụ adreesị ga-egosi na ntụziaka na igbe nke akụrụngwa n'onwe ya. Gaa na ngalaba "Nkwado" ma ọ bụ "Ndị ọkwọ ụgbọala".
N'ọtụtụ ọnọdụ, enwere akara pụrụ iche na saịtị ahụ, ebe ị ga-achọ ịbanye ngwa ngwa motherboard, wee gaa na ibe ya.
Lelee na ihe nlereanya ziri ezi na-egosipụta na taabụ, wee pịa bọtịnụ ahụ "Download".
Tupu ibudata, jide n'aka na akọwapụtara usoro ziri ezi nke sistemụ arụmọrụ. Ọ bụrụ na saịtị ahụ apụghị ịghọta ya, tinye aka na ozi ahụ aka, na-ahọpụta nhọrọ kwesịrị ekwesị site na listi.
Na-esote, chọta ya na onye ọkwọ ụgbọala, jide n'aka na nke a bụ mbipute kachasị ọhụrụ, wee pịa bọtịnụ ahụ "Download" ma ọ bụ otu n'ime njikọ nke onye ahụ mepụtara.
Nbudata faịlụ ga-amalite, mgbe nke a gasịrị ọ na-anọgide na-emeghe ya ma usoro nke nrụnye akpaka ga-amalite. Mgbe e mechara ya, a na-atụ aro ka ị malitegharịa kọmputa maka mgbanwe ndị ị ga-eme.
Usoro nke 2: Ịba uru site n'aka onye na-emepụta ihe
Ndị na-emepụta ngwá ọrụ buru ibu na-enwekarị ngwanrọ nke ha wee nyochaa ma tinyezie mmelite ndị ahụ. Na ya, ị nwere ike ozugbo itinye ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ ahụ achọrọ. I choro:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị na-emepụta katọn na họrọ mpaghara ọhụụ "Software" ma ọ bụ "Ntuziaka". Na ndepụta nke meghere, ị ga-achọta ngwa ngwa a.
Họrọ ụdị nke kachasị ọhụrụ wee pịa bọtịnụ ahụ. "Download".
A ga-arụ ọrụ ahụ na-akpaghị aka; ihe niile ị ga-eme bụ ịmepụta usoro ihe omume ma gaa na mpaghara ahụ. "BIOS & Ọkwọ ụgbọala".
Chere ruo mgbe agwusiri ike, dozie faịlụ ịchọrọ itinye na pịa "Melite" ma ọ bụ "Wụnye".
Nzọụkwụ 3: Ntọala nwụnye ọrụ
Nhọrọ ọzọ nke na-enye gị ohere ịwụnye ngwa ngwa ọkwọ ụgbọala niile achọrọ bụ iji software pụrụ iche. Ọ na-arụ ọrụ n'ụkpụrụ ndị ọrụ gọọmenti sitere n'aka onye mmepụta, naanị na-emepụta nyocha zuru ụwa ọnụ nke PC dum. Ọnụ ala bụ ugwo nke ụfọdụ ndị nnọchiteanya na ntinye nke ngwanrọ ọzọ. Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ndị nne na nna na-eji DriverPack Solution eme dika nke a:
Gbaa usoro ahụ ebudatara ma gbanwee ozugbo gaa usoro ọkachamara ka ewe ghara itinye faịlụ ndị na-adịghị mkpa.
Tinye akà rà ihe niile ịchọrọ itinye, wepụ ha na-enweghị isi.
Pịgharịa gaa na windo wee pịa "Wụnye niile".
Na mgbakwunye na DriverPack na Intanet enwere nnukwu ngwanrọ nke yiri ya. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ ahụ, ọbụnakwa onye mbido nwere ike ịghọta ya. Anyị na-atụ aro ịgụ isiokwu anyị ọzọ na njikọ dị n'okpuru ebe a, ị ga-amụta nke ọma banyere ngwanrọ kachasị mma maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala.
Nzọụkwụ 4: Nwụnye site NJ ngwaike
E kenyere mpaghara nke ọ bụla nọmba pụrụ iche. Dịka e kwuru n'elu, motherboard ahụ nwere ọtụtụ ihe e ji wuo, nke ọ bụla nwere ID ya. Naanị ị ga-ama ya ma jiri ọrụ pụrụ iche ịchọta faịlụ ọhụrụ. A na-eme nke a dị ka ndị a:
Gaa na ebe nrụọrụ DevID
Na ndepụta nke gosipụtara, chọta ma pịa "Onye njikwa ngwaọrụ".
Gbasaa ụdị ahụ, họrọ ngwá ọrụ site na ịpị igodo na-emeghe "Njirimara".
Na taabụ "Nkọwa" na mmapụta menu, ezipụta "ID ID" ma detuo otu n'ime ụkpụrụ ndị egosiri.
Na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla, pịa njikọ dị n'elu ma kpaa njirimara depụtaghachiri n'ime ogwe ọchụchọ ahụ.
Ọ na-anọgide na ịhọrọ ụdị os, chọpụta ụdị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị na ibudata ya.
Windows sistemụ arụmọrụ nwere ọrụ nke ya na-enye gị ohere ịchọta ma melite ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ site na Ịntanetị. O di nwute, ọ bụghị mgbe nile ka osiri nke oson na-adabere na ngwa ngwa, ma n'ọtụtụ ọnọdụ, usoro a ga-enyere gị aka ịwụnye ngwanrọ dị mma.
Pịa na "Malite" na imeghe "Ogwe njikwa".
Chọta na windo ahụ meghere "Onye njikwa ngwaọrụ".
Gbasaa akụkụ achọrọ ma jiri aka nri pịa ngwá ọrụ ndị dị mkpa, wee gaa "Njirimara".
Pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị iji malite ịkwalite ọrụ ọkwọ ụgbọala.
Họrọ nhọrọ ntinye "Nchọgharị akpaaka maka ndị ọkwọ ụgbọala emelitere" ma chere ka usoro ahụ mezue.
Ọ bụrụ na achọtara faịlụ ọhụrụ, kwenye na nwụnye ya, ọ ga-egbu ya n'onwe ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro ọ bụla dị mfe, omume niile na-eme na nanị nkeji ole na ole, mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-etinye faịlụ niile dị mkpa na kọmputa ahụ. N'agbanyeghị ihe nlereanya na emeputa nke motherboard, algorithm nke omume ga-abụ ihe dịka otu a, ọ ga-agbanwe naanị interface nke saịtị ma ọ bụ ọrụ.